भाडा लसुनको साथ प्रभावकारी वसंत detoxification | Sueneé Universe
पृथ्वीमा ब्रह्मांडको उपस्थिति अनलक गर्दै (3.díl)
भाडा लसुनको साथ प्रभावकारी वसंत detoxification
12311x 16। 04। 2019 1 रिडर
श्रेणी: प्रकृति, स्वास्थ्य र जीवन शैली
एक जडिबुटी जडीबुटी कि पुरातन जर्मन पहिले देखि नै जान्दथे एक धूर्त शक्ति प्रदान गरिरहेको थियो। त्यो वसन्त दूतहरू मध्ये एक हो जसले जाडो पछि नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न हामीलाई मदत गर्नेछ। यो शरीर detoxifying र भिटामिन सी को एक महत्वपूर्ण स्रोत को एक धेरै प्रभावी माध्यम हो र किन यो "भाडा" भनिन्छ? जवाफ हो। तिनी एक लोकप्रिय भालू पौधे हो जसले उनको जाडोको निद्रा पछि प्रशस्त हुन्छ।
बोसो लसुनको गीला, छालामा राखिएको ठाउँहरूमा धेरै सफल हुन्छ। जहाँ यो सामान्य र कहिलेकाँही धेरै अमीर हो। यसकारण यो प्रायः प्रायजसो बाढीकालमा र पतली जंगली वनहरू, वरिपरि, ढलानका पातहरूमा भेटिन्छ। यो नम, स्यान्डी-लोमी मा मिट्टी मा मिल्छ। यो अक्सर प्रायजसो बागान र पार्कहरूमा सजावटको बिरुवाको रूपमा बढिन्छ। हामी यो पनि हाम्रो इलाका मा पाउन सक्छौं, विशेष गरी मोरभिया र पूर्वोत्तर बोहेमियामा।
यो मईको अन्तमा र जूनको दौडान ब्ल्लो गर्छ। सबै भन्दा माथि, पातहरू एकत्रित हुन्छन्, र यो पहिले देखि अप्रिलदेखि मध्य-मई सम्म रोप्ने सुरु हुन्छ। घरमा खरिद गरिएका बीउहरू पनि बढ्न सकिन्छ।
जडीबुटीले अन्नपूर्ण आवश्यक तेल, जुन रोप्ने तोडेर एक ज्ञात allicin मा परिणत गर्दछ। यो एक अत्यन्त एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, अभिनेत्री र प्रोप्लोनर हो। यसले रक्तचाप र रक्त शर्करा र कोलेस्ट्रॉल स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसको अतिरिक्त, यो रगत सफा गर्छ र हृदयमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। एकै समयमा यो हृदय रोगको बिरुद्ध एक ग्यारेन्टी रोकथाम हो। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले कवक, माइकोस वा जीवाणु संगै, साथै पेट मा परजीवी संग व्यवहार गर्न सक्छन्। यो दस्त सहित समेत पाचन समस्याहरूको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यसले फ्लू र चिसोको साथ सुदृढतालाई पनि मदत गर्नेछ, तर माथिल्लो श्वसन समस्याका साथ पनि। यसको अतिरिक्त, यसमा डाईडिटिक, एन्टीबायोटिक र एन्टिओक्सिडेंट प्रभाव छ। कहिलेकाहीं, यो पनि क्यान्सरमा मद्दतको लागि लिङ्क गरिएको छ।
हामी यो लसुन कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं?
ताजा पातहरू एकत्रित गर्न र स्प्रेडमा कच्चा खानुहोस्, सलादहरू वा तिनीहरूलाई सोप, पातलो वा अन्य सब्जियोंमा तातो लगाउन। हामी पछिल्ला फ्रिजमा फ्रिजको ताजा कटाई राख्न सक्दछौं वा तिनीहरूलाई अल्कोहल वा तेलमा राख्दछौं। ट्रेकुचर वा तेलको साथ, हामी खराब चोटलाई चोट लगाउन सक्छौं, मुखमा सुगन्धहरू, माइकोसिस र आन्तरिक रूपमा उनीहरूलाई बगैचा वा कब्ज, आंतुष्मा परजीवी, उच्च रक्तचाप, प्रतिरक्षा कम, खरानी र चिसोको लागि प्रयोग गर्दछ। तेल पनि खाना पकाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
लसुनसँग सलाद - जडी बूटी को पातहरु धो र कटौती। कटा टमाटरहरू थप्नुहोस् र एक साथ मिश्रण गर्नुहोस्। जैतून का तेल, नमक र कालो मिर्च र सेवा गर्नुहोस्।
भाडा लसुनसँग पेस्टो - हामी 1 लसुन को बडा बंडल को मिश्रण को4चप्पलेट को सब्जी को तेल को क्रमिक अतिरिक्त संग मिश्रण गर्दछौं। संयोजन पछि, 20-40g grated वा पतला कटा पर्मेसन र सिजन नुन संग जोड्नुहोस् र हामी खा सकते हो।
भालू लहसुन (© शटर्स्टकक)
लामो समयको लागि उपचार - भालू ट्रेकुचर
Sclerosis, vascular कठोर, अनिवार्य, अवसाद र उच्च रक्तचाप को लागि एक प्राकृतिक उपचार प्रयास गर्नुहोस्। पतला कटा पत्तिहरू र प्याजहरू बोतलको गर्दनमा भर्नुहोस् र 40 वोदका वा शुद्ध फार्मेसी शराबमा हाल्नुहोस्। 14 दिनहरू सूर्यमा वा कोठाको कोठामा छोड्नुहोस्। त्यसपछि नाली र एक दिन एक सानो चम्मच लिनुहोस्। तर लामो अवधि छैन।
के लागि हेर्न को लागी
जंगलमा सङ्कलन गर्दा, घाटी वा महासागर कि विषाक्त पदार्थको समान लिली संग भ्रमबाट सावधान रहनुहोस्। अत्यधिक प्रयोग दस्त हुन सक्छ। यसले सबैलाई एलर्जी र पेट, पनीर र अग्लो प्यान्रेरासका साथ समस्याहरू भोग्ने मानिसहरूको प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैन।
तपाईं लेख मनपराउनुहुन्छ?
कृपया अर्को काममा अनुवादकहरूलाई समर्थन गर्नुहोस् र एक पारदर्शी खातामा एक अर्डर सेट अप गर्नुहोस्: 2900794933 / 2010। विदेशबाट भुक्तानी IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP। कृपया "DAR" र सन्देशमा लेखको लेख प्राप्तकर्तालाई समावेश गर्नुहोस् वा VS: 31670 र SS: 100 लाई भर्नुहोस्।
यो प्लास्टिक किन थिएन किनकि किनकि यो खरीद गर्नु अघि थियो
एक कथासँग खानाको थलो वा कसरी उनीहरूले हाम्रो (महान) आमाबाबुको स्वभावलाई सुरक्षित राख्छन्
Auroville - सरकार बिना धर्म, धर्म र पैसा
28। 05। 2019
जुन 2019: 4855 CZK
प्रति महिनाको लागतले घटाउँछ: 17 17%
13.06। हाना फ्लोरोरोभ 50 CZK
13.06। रेनाटा क्लिम्न्दोवा 50 CZK
12.06। मोनिका वैन्न्सोभो 50 CZK
- यो साइट सही छ 121 प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन